प्रदेश नं. ५ मा लोगो सार्वजनिक
बुटवल । प्रदेश नं. ५ को सांसद र कर्मचारीहरूले लगाउने छुट्टाछुट्टै लोगो सार्वजनिक गरिएको छ । सोमबार अस्थायी राजधानी रूपन्देहीको बुटवलमा आयोजित समारोहमा लोगो सार्वजनिक गरिएको हो ।
सांसदहरूले लगाउने लोगोमा प्रदेश पाँचका जिल्लालाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । लोगोमा सबैभन्दामाथि सिस्ने हिमाल छ । हिमालकोमाथि राष्ट्रिय झण्डा राखिएको छ । त्यसभन्दा तल बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र लुम्बिनीको अखण्ड ज्योति राखिएको छ यी सबैलाई दायाँबायाँबाट धान र जौका बालाले घेरिएको छ । त्यसभन्दा पनि तल महिला र पुरुषको मिलाएको हात राखिएको छ । सबैभन्दा पुछारमा ‘प्रदेश सभा प्रदेश नम्बर ५’ लेखिएको छ ।
पूर्वी रुकुममा पर्ने सिस्ने हिमालले उच्च पहाडी जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरेको छ भने लुम्बिनीले कपिलवस्तु र रूपन्देहीलाई समेटेको छ । धान र जौका बालाले कृषिमा उर्वर तराई तथा पहाडका अन्य जिल्लालाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । महिला र पुरुषको मिलाएको हातले लैङ्गिक समानतालाई झल्काएको छ । यसैगरी, कर्मचारीहरूले लगाउने लोगोमा दायाँबायाँ राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसले घेरेर बीचमा गौतमबुद्धको चित्र राखिएको छ । सबैभन्दामाथि हिमाल र हिमालको चुचुरोमा राष्ट्रिय झण्डा राखिएको छ ।
१२ जना प्रतिस्पर्धीमध्ये तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१ दाङका खगेश्वर भण्डारीले बनाएको लोगोलाई छनोट गरिएको हो । उनलाई लोगो सार्वजनिक समारोहमा नगद २५ हजारले सम्मान समेत गरिएको छ ।
अवरोधका बीच प्रदेश ४ को बजेट पारित
पोखरा । प्रदेश ४ सरकारले ल्याएको बजेट दुई–तिहाइ बहुमतले पारित भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस र नयाँ शक्ति पार्टीको अवरोधका बाबजुद बजेट बहुमतबाट पारित गरिएको हो । सरकारकातर्फबाट अर्थमन्त्री किरण गुरुङले १९ गते एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रूपैयाँको बजेट संसदमा पेश गरेका थिए । दुई दिनको छलफलपछि बजेट पारित गर्ने दिन शुक्रबार प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस र नयाँ शक्तिले एक्कासि संसद अवरुद्ध गराएपछि आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो ।
एमाले, माओवादी र जनमोर्चाले बजेटको पक्षमा मत दिए भने नेपाली काङ्ग्रेस र नयाँ शक्तिले बजेटको विपक्षीमा मत दिएका थिए । प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस र नयाँ शक्तिले प्रदेशको विकासलाईभन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्ने र अनियमितता बढाउने गरी बजेट ल्याइएको आरोप लगाएका थिए । काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रतिपक्षको चासो सम्बोधन नगरी बजेट ल्याइएकाले अवरोध गर्नु परेकोे बताए । यस्तै, प्रदेशको नामाकरण पनि यसै बैठकमा हुने भनिए पनि नामाकरण हुन सकेन । सत्तारूढ दल एमाले–माओवादीको धारणा नआएकाले आइतबारको संसद बैठकले प्रदेश राजधानी तथा नामाकरण समितिको एक महिना म्याद थप गरेको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले एमाले–माओवादीका सांसदले प्रदेश नामाकरणको मिति एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । शुक्रबार काङ्ग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेपछि आइतबार मात्रै यसको म्याद थप भएको हो । प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानीको विषयमा सझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न चैत्र १२ गते समिति गठन भएको थियो । समितिले प्रदेशका ११ वटा जिल्ला पुगेर राय तथा सुझाव सङ्कलन पनि गरिसकेको छ ।
निजी स्कुलमा पढ्नेले सरकारी आरक्षण नपाउने
काठमाडौँ । सरकारले निजी विद्यालयमा पढ्नेहरूलाई निजामति सेवामा आरक्षण नदिने भएको छ । निजामति सेवामा समावेशी (आरक्षण) सुविधा लिन सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेकै हुनु पर्ने गरी सरकारले सङ्घीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउने गृहकार्य थालेको छ ।
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले विभिन्न सुझावका आधारमा समावेशी र आरक्षण कोटामा पुनर्विचार गर्ने गरी सङ्घीय निजामति ऐनको मस्यौदा बनाउने गृहकार्य थालिएको जानकारी दिए । अब बन्ने मस्यौदा अनुसार अब एक व्यक्तिले अब एक पदका लागि मात्रै आरक्षण कोटाको सुविधा पाउनेछन् ।
सरकारले विपन्न, गरिब तथापछि परेका सबै पक्षको सार्थक सहभागिता वृद्धि गर्नका लागि २०६४ सालदेखि निजामति सेवामा निश्चित कोटासहित आरक्षणको व्यवस्था लागु गर्दै आएको थियो । तर समाजमापछि परेका जात÷जातिका पनि धनाढ्य वर्गले मात्रै यो सुविधा पाएको भन्दैपछि परेका जातजाति र समुदायका पनि विपन्नहरूले नै आरक्षण सुविधा पाउने व्यवस्था सहित सरकारले समावेशी प्रणालीमा सुधार गर्ने नीति ल्याउन लागेको हो ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको नेतृत्वमा गठित सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना सहजीकरण समितिको सुझावका आधारमा बोर्डिङ तथा निजी विद्यालयमा पढेकाहरूले समावेशी कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्थाको गृहकार्य थालिएको हो । समितिका अध्यक्ष दाहालले समावेशी र आरक्षण कोटाको १० वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा आर्थिक अवस्था अत्यन्तै मजबुत भएका, बोर्डिङमा पढेका र एउटै परिवारका धनाढ्यहरूले मात्रै यस्तो सुविधा उपभोग गरेको पाइएकाले सरकारको लक्ष्य पुरा नभएको बताए ।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता सहसचिव लक्ष्मी विलास कोइरालाले पनि समावेशीले आत्मसात गरेको मर्म अनुसार लक्षित समुदायले आरक्षण कोटाको अवसर प्राप्त गर्न नपाएको बताए । दलित, जनजातिभित्रका विपन्नले यसको प्रतिफल पाउन नसकेकाले समावेशीको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता कोइरालाको भनाइ छ ।
हाल सरकारले निजामतिमा कुल पदको ४५ प्रतिशत सिटमा आरक्षण कोटाबाट पदपूर्ति गर्दै आइरहेको छ, जस अनुसार समावेशीतर्फको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, मधेसी २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २२ प्रतिशत, दलित नौ प्रतिशत, अपाङ्ग पाँच र पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशतमा छुट्याएर सोही अनुसार पदपूर्ति गर्दै आइरहेको छ ।
सामुदायिक स्कुलका लागि आर्थिक सङ्कलन गर्न सप्ताह वाचन
काठमाडौँ । अमेरिकाको कोलोराडो राज्यमा नेपालीको साझा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि आर्थिक सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले वैशाख १५ गतेदेखि २२ गतेसम्म भएको सप्ताहमा करिब छ करोड रूपैया सङ्कलन भएको छ । सप्ताह वाचन प्रवीण गुरु दीनबन्धु पोखरेलले गरेका थिए ।
नेपाली घरका कोषाध्यक्ष जगदीश ढकालले दिएको जानकारी अनुसार जम्मा पाँच लाख ८१ हजार एक सय ७१ डलर ६० सेन्ट्स सहयोग सङ्कलन भएको हो । अमेरिकाको विभिन्न भागमा आफ्नो सामुदायिक भवन निर्माण कार्यको अग्रसरता बढेसँगै कोलोराडो निवासी नेपालीले समेत सप्ताहको आयोजना गर्दै रकम सङ्कलन गरी भवन निर्माणको कार्यको सुरुवात गरेका छन् । (एजेन्सी)
पाकिस्तानमा गृहमन्त्री अहसान इकबालमाथि गोली प्रहार
काठमाडौँ । पाकिस्तानका गृहमन्त्री अहसान इकबालमाथि गोली प्रहार भएको छ । पाकिस्तान प्रहरीका अनुसार काँधमा गोली लागेका उनी सख्त घाइते भएका छन् ।
आइतबार पाकिस्तानको नरोवालको कन्जरुरमा एक र्‍यालीलाई सम्बोधित गर्ने क्रममा उनीमाथि गोली चलाइएको पाकिस्तानका सरकारी अधिकारीले जानकारी दिएका हुन् । पाकिस्तानी न्युज च्यानल ‘जियो’ का अनुसार घटना पश्चात् इकबाललाई तुरुन्त अस्पताल पुर्‍याइएको र उनी खतरामुक्त रहेको बताइएको छ ।
गोली चलाउने सन्दिग्धलाई पक्राउ गरिएको छ । पाकिस्तानका गृह राज्यमन्त्री तलाल चौधरीले संदिग्ध हमलाकर्ताको उमेर २०देखि २२ वर्षको बीचमा छ । पंजाब सरकारले ट्विट गरेर एक सुटरलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ । यसका साथै अहसान इकबालको डी.एच.क्यू. अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ । (एजेन्सी)
सेनाको गोलीबाट काश्मिरमा प्राध्यापक सहित १० जनाको मृत्यु
काठमाडौँ । भारत प्रशासित काश्मिरमा सेनाले चलाएको गोली लागि काश्मिरी क्षेत्रमा सक्रिय विद्रोही सङ्गठनको निकट मानिने एक प्राध्यापक सहित १० जना मारिएका भारतीय प्रहरीले जनाएको छ । काश्मिर क्षेत्रमा मारिएका एक लडाकुको समर्थनमा हजारौँको सङ्ख्यामा निस्केको जुलुसमा सहभागी हुने क्रममा विद्रोही निकट मानिने एक प्राध्यापक, पाँच जना विद्रोही लडाकु र पाँच जना स्थानीय सर्वसाधारणको मृत्यु भएको प्रहरी महानिरीक्षक शेष पाउल वेडले बताए ।
प्रदर्शनका क्रममा सयौँ मानिस घाइते भएका छन् भने विद्रोही समूह हिजबुल मुजाहिद्दिनका उच्च कमान्डर पनि मारिएको बताइएको छ । श्रीनगरको दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित सोपियन जिल्लाको वाडिगाउँमा विद्रोहीहरू लुकेर बसेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा सरकारी फौज गाउँमा पसी कारवाही चलाएको र उक्त कारवाहीमा विद्रोही सहित केही स्थानीयको मृत्यु भएको भारतीय अधिकारीले बताएका छन् ।
सेनाले विद्रोही बसेको क्षेत्रलाई घेराबन्दी गरी आत्मसमर्पण गर्न भनेको तर विद्रोहीले गोली चलाउन थालेपछि भएको व्यापक शसस्त्र झडपका क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको वेडले एएफपीसँग बताए । उनका अनुसार शुक्रबारदेखि भूमिगत भएका समाजशास्त्रका प्राध्यापक मोहम्मद रफी भाटलाई पनि अन्य विद्रोहीलाई जस्तै आत्मसमर्पण गर्न भनिएको तर उनले त्यसो गर्न नमानेपछि झडपमा उनीसहित केही विद्रोहीको मृत्यु भएको महानिरीक्षक वेडले बताए । काश्मिरमा यो वर्ष सरकारी सेना र विद्रोही समूहसँग भएका झडपका क्रममा अहिलेसम्म एक सय २० जनाको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये २२ जना सर्वसाधारण परेका छन् भने ६७ विद्रोही र २८ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ । (एजेन्सी)
अफगानिस्तानमा विदेशी अपहरित
काठमाडौँ । अफगानिस्तानको उत्तरी राज्य बाघलान प्रान्तको राजधानी पुल–ए–खुमरीमा आइतबार सशस्त्र समूहका भनिएका केही अज्ञात व्यक्तिले छ जना विदेशी र उनीहरूका चालकलाई समेत अपहरण गरी लगेको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन् । विद्युत कम्पनीको उपकेन्द्रमा काम गर्न खाजा अलान क्षेत्रमा खटिएका विदेशी प्राविधिकको समूहलाई बिहानै आएका सशस्त्र समूहले काम गर्न जाने क्रममा अपहरण गरिएको प्रहरी प्रवक्ता जाबिहुल्लाह सिजाले सञ्चारकर्मीलाई बताए ।
उनले अपहरणमा परेका विदेशी कुन देशका थिए भन्ने विषयमा केही खुलाउन चाहेनन् । उनीहरूको राष्ट्रियताबारे नबताइकनै अधिकारीहरूले अपहरणमा तालिवान लडाकुको हात रहेको बताएका छन् । प्रहरी प्रवक्ता सिजाले भने– अपहरणमा तालिवान कमान्डर मुल्लाह शाहेनको हात रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले जनाएको छ । अपहरित विदेशी सहित उनीहरूका चालकको सुरक्षित रिहाइका लागि सुरक्षाकर्मीले सम्बद्ध सबै पक्षसँग पहल गरिरहेको उनले बताए । तालिवान समूहले उक्त घटनाबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
भारतीय इन्जिनियर अपहरित
अपहरण गरेका छ जना भारतीय इन्जिनियर भएको अफगानी अधिकारीले बताएका छन् । एक अज्ञात बन्दूकधारी समूहले गाडीमा तालीवान विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्र पुल–ए–खुमरीको बाहिरी क्षेत्रमा हिडिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई अपहरण गरिएको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीले उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिन आग्रह गर्दै आएको भए पनि अपहरणमा परेका प्राविधिकहरूले उक्त अनुरोधलाई नमानेको प्रहरी प्रवक्ता जावी सुजाले एएफपीलाई बताए ।
विद्युत कम्पनीको उप–केन्द्रमा काम गर्न खाजा अलान क्षेत्रमा खटिएका विदेशी प्राविधिकको समूहलाई विहानै आएका सशस्त्र समूहले काम गर्न जाने क्रममा अपहरण गरिएको यसअघि प्रहरीले बताएको थियो । अपहरणमा तालिवान कमान्डर मुल्लाह शाहेनको हात रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले जनाएको छ । (एजेन्सी)
हकिङको अन्तिम सिद्धान्त सार्वजनिक
काठमाडौँ । प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टिफन हकिङको मृत्यु भएको डेढ महिनापछि क्याम्ब्रिज विश्व विद्यालयले उनको नयाँ सिद्धान्त सार्वजनिक गरेको छ ।
उनको मृत्यु १४ मार्चमा भएको थियो । मृत्युको दश दिन अघि मात्र उनले सिद्धान्तलाई अन्तिम रूप दिएको बताइएको छ । यो सिद्धान्त मार्फत् उनले पुरानो सिद्धान्तलाई गलत बताएका छन् । ब्रह्मान्डको अर्को छेउ पनि हुन सक्ने सिद्धान्तमा बताइएको छ । अघिल्लो सिद्धान्तमा ब्रह्मान्ड अनन्त भएको बताइएको थियो ।
नयाँ सिद्धान्त जर्नल अफ आई एनर्जी फिजिक्समा प्रकाशित गरिएको छ । हकिङको पुरानो सिद्धान्तमा शङ्का उत्पन्न भएको थियो– बिगब्याङपछि एक नभई अनेकौँ ब्रह्मान्डको निर्माण भएको हुनु पर्छ । हकिङको नयाँ सिद्धान्तमा अन्तरिक्षमा यस्तो स्थान पनि हुने छ, जहाँ धर्ती जस्तो सौर्यमण्डल हुने छ भनिएको छ । त्यो अन्तरिक्षमा डाइनासोर हुन सक्छ, मानिसहरू शिकार गर्न सक्छन्, त्यो धर्ती जस्तै हुन्छ भन्न मुश्किल छ । तर त्यहाँको जिन्दगी पृथ्वीजस्तै हुन सक्छ ।
हकिङले आफ्नो अघिल्लो सिद्धान्तलाई गलत बताउँदै लेखे– बिगब्याङभन्दा अगाडि के थियो ? कसैले भन्न सक्दैन । कसैले त्यस्तो दाबी गर्छ भने त्यो झुटो हो । मैले पनि यस्तो दाबी गरेको थिएँ र यो स्टडीले त्यसलाई गलत सावित गर्‍यो । बिग ब्याङ सिद्धान्तले ब्रह्मान्ड कहिले र कसरी बनेको भनी बताउने कोशिस गर्छ । हकिङले करिब १५ अर्ब वर्ष पहिले भौतिक तत्व र ऊर्जा एक विन्दुमा समेटिएका रपछि विन्दु फैलिन थालेको लेखे । बिग ब्याङ खासमा बम विस्फोट जस्तो थिएन, बरू यसमा प्रारम्भिक ब्रह्मान्डका कणहरू समस्त अन्तरिक्षमा फैलिएको र एक–अर्काबाट टाढा गएको उनले लेखे । (एजेन्सी)
तीन वर्षपछि प्रचण्ड फेरि प्रधानमन्त्री हुने ?
काठमाडौँ । देशमा फेरि पनि अस्थिरता उत्पन्न हुने भएको छ । झण्डै दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार भएर पनि पाँच वर्षसम्म टिक्न नसक्ने सङ्केत देखिएको छ ।
जनताले वाम गठबन्धनलाई स्थायी सरकारका लागि मतदान गरेका थिए । तर माओवादीसँग पार्टी एकता गर्न एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीन वर्षपछि प्रचण्डका लागि प्रधानमन्त्री पद त्याग्न तयार भएका छन् । प्रचण्डले एकता महाधिवेशनपछि मागेको अध्यक्ष पद दिन नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री पद दिएर ओलीले पार्टी एकता गर्न प्रचण्डलाई मनाएका हुन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले आन्तरिक तयारी सकेर पार्टी एकता घोषणाका लागि जेठ पहिलो साता ‘संयुक्त अधिवेशन’ बोलाउने तय भएको जनाइएको छ । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो छलफलमा दुवै पार्टी विघटन र नयाँ पार्टी घोषणाका लागि ‘संयुक्त अधिवेशन’ बोलाउने समझदारी गरिसकेको स्रोतले जनाएको छ । जेठको पहिलो साता संयुक्त अधिवेशन बोलाउने सहमति भइसके पनि पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक मार्फत् मिति तोक्ने तयारी छ ।
दुई अध्यक्षबीच २० वैशाखमा भएको लामो छलफलले एकतासँग जोडिएका सबै विषय टुङ्गो लगाएको हो । त्यस दिन ओली र प्रचण्डबीच दुई पटक छलफल भएको थियो भने एमाले नेता माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डबीच पनि छुट्टै कुराकानी भएको थियो । सोही छलफलले तीन वर्षपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने लगायतका समझदारी भएको स्रोतले बताएको छ ।
विवादित भनिएको चुनाव चिह्न, विधानको प्रस्तावना र केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्यामा दुई अध्यक्षले सहमति गरेका छन् । एकीकृत नयाँ पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चुनाव चिह्न सूर्य राख्ने सहमति भएको छ । यस्तै, तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध राजनीतिक परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण परिघटना भएको प्रसङ्ग विधानमा लेख्ने सहमति भएको छ । यसैगरी केन्द्रीय कमिटी २९९ सदस्य बनाउने भनिएकोमा अब सङ्ख्या ३५१ बनाउने सहमति भएको छ । यसमा एमालेबाट करिब २०० र माओवादीबाट करिब १५० सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले छुट्टाछुट्टै अन्तिम केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनेछन् । दुवै पार्टीका केन्द्रीय कमिटीले आ–आफ्नो पार्टी विघटन गर्ने र एक–अर्कासँग एकीकरण गर्ने औपचारिक निर्णय गर्नेछन् । पार्टी एकता संयोजन समितिले तोकेको मितिमा दुवै पार्टीको संयुक्त अधिवेशन आयोजना हुने छ । सो अधिवेशनले दुवै पार्टी भङ्ग भएको निर्णय अनुमोदन गर्दै नेतृत्व सहित नयाँ पार्टी गठन गर्ने निर्णय गर्ने छ । सोही निर्णय अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने छ ।
म्याग्दीका आठ विद्यालयमा विद्युतीय पुस्तकालय
म्याग्दी । म्याग्दीका आठ विद्यालयमा आधुनिक प्रविधियुक्त विद्युतीय पुस्तकालय स्थापना भएको छ । म्याग्दीबाट विभिन्न देशमा रोजगारीका सिलसिलामा गएका म्याग्देली प्रवासीहरूको पहलमा ती विद्यालयमा विद्युतीय पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ । म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ (मोना) ले यस अघि २५ विद्यालयमा स्थापना गरेको विद्युतीय पुस्तकालय पछिल्लो पटक थप आठ विद्यालयमा विस्तार गरेको हो ।
तेस्रो चरणमा किसानी मावि बिम, राष्ट्रिय मावि नेप्टेचौर, जनप्रिय आधारभूत विद्यालय बरञ्जा, महेन्द्ररत्न आधारभूत विद्यालय बरञ्जा, हिमाञ्चल मावि नागी, विष्णु राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय किमचौर, बेनी सामुदायिक मावि र सरस्वती मावि सिङ्गामा विद्युतीय पुस्तकालय जडान गरिएको मोनाले जनाएको छ । यस अघि पहिलो चरणमा दश र दोस्रो चरणमा १५ विद्यालयमा विद्युतीय पुस्तकालय जडान गरिएको मोनाका अध्यक्ष चक्र बहादुर थापाले बताए । अध्यक्ष थापाका अनुसार रोजगारी, अध्ययन, व्यापार, व्यवसायको सिलसिलामा विदेशिएका म्याग्देलीले सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’ बाट अभियान चलाएर विद्युतीय पुस्तकालय स्थापनाका लागि आर्थिक स्रोत जुटाइएको हो ।
मोनाले म्याग्दीका सबै २३२ वटा सामुदायिक विद्यालयमा विद्युतीय पुस्तकालय स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एउटा विद्युतीय पुस्तकालयको सफ्टवेयर जडान गर्न ७५ हजार रूपैया हाराहारीमा बजेट खर्च हुने गरेको छ । इन्टरनेटको प्रयोग बिनै कम्प्युटरमा पाठ्यपुस्तक पढ्न, दृष्य हेर्न र श्रव्य सामग्री सुन्न सकिने सुविधा रहेको छ ।
औरावनी छुवाछूतमुक्त वडा घोषणा
बारा । बाराको गढी गाउँपालिका–२ औरावनीलाई जिल्लामै पहिलो छुवाछूतमुक्त वडा घोषणा गरिएको छ । गढी गाउँपालिका–२ नम्बर वडा कार्यालयको आयोजना र नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घ इटहरी सुनसरीको सहआयोजनामा यस २ नम्बर वडालाई छुवाछूतमुक्त वडा घोषणा गरिएको हो ।
छुवाछूतमुक्त वडा घोषणा गर्नका लागि सबै सूचक पुरा गरी वडालाई छुवाछूतमुक्त वडा घोषणा गरेको आयोजक संस्थाका संयोजक बद्री नारायण शर्माले जानकारी दिए । छुवाछूतमुक्त वडा घोषणा कार्यक्रममा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद उप्रेती, गढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष राज कुमारी चौधरी, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घ इटहरी सुनसरीका अध्यक्ष मान बहादुर रसाइली लगायतकाले छुवाछूतमुक्त वडा घोषणा कार्यक्रम गरेर मात्र नहुने बताउँँदै यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।